Archive du 20190510
Rajoelina sy ny IEM Tsy niainga akory dia vaky ny sambo
Mbola tsy niainga akory ny IEM, dia vaky sahady ny sambon’ny mpitondra ankehitriny. Toa mifamingana sy samy maka ho azy, miaro ny sezany sy miezaka maka ny fon’ny filoha, tsy dia miray hina,…
Fampielezan-kevitra Notetezin-dRavalo Antsirabe, Miandrivazo,…
Ambatolampy, Antsirabe, Ankazomiriotra, Miandrivazo, Malaimbandy no nandehanan’i Marc Ravalomanana omaly alakamisy 9 mey 2019, ka nanaovany fampielezan-kevitra niaraka tamin’ireo kandidan’ny TIMK25.
CENI Madagascar Hitory ireo mandika lalàna amin’izay
Tontosa omaly alakamisy 9 mey tetsy amin’ny Carlton Anosy ny atrikasa fampiofanana ho an’ireo solontenan’antoko sy kandida amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana.
Hikotrehana hala-bato ny lisi-pifidianana Nidoboka am-ponja ny lehiben’ny CED Ihosy
Nidoboka am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjaben’Ihosy nanomboka ny 7 mey 2019 teo ny filohan’ny CED (Commission Electorale de District) na ny Rantsa-mangaikan’ny CENI any Ihosy Rakotondrazandriny Louis Valdor.
Ambohidahy sy Nanisana Hihenjan-droa koa ny tady ?
Miteraka resabe ny raharaha OMACI. Nisy ny fitondrana mpitandro filaminana nandritra ny famindram-pahefana teo amin`ny tale jeneraly teo aloha sy ny minisiteran`ny serasera.
SMATCH –IN XXL andiany fahavalo Hotanterahina manomboka anio etsy Mahamasina
Hotontosaina manomboka anio etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina, haharitra valo andro ilay hetsika ara-panatanjahantena , “Smatch-In XXL”, andiany fahavalo, tohanan’ny orinasa Star, amin’ny alalan’ny zava-pisotro XXL.
NIBAHANA KORTEZIN’NY FILOHA
Nosamborina avy hatrany ary nentina teny amin’ny kaomisaria foibe ilay mpamily izay nibahana ny kortezin’ny filoham-pirenena.
Tsarafaritra Tsimbazaza Ady gasy no hamakiana ilay vatobe
Tandindonin-doza ny mponina manodidina ireo vatobe ahiana hihotsaka eny Tsimbazaza, hoy ny sekretera mpanatanteraky ny biraom-pirenena misahana ny loza voajanahary eto amintsika na BNGRC,
Karama farany ambany 200 000 Ar Mihatra amin’ny faran’ny volana mey ho an’ny orinasa maro
Samy manana ny fomba fiasany ny ankamaroan’ireo orinasa tsy miankina eto amintsika taorian’ilay fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondram-panjakana sy ny sendikan’ny mpiasa ary ny vondron’orinasa
Fikambanana FIMIAM Nomen’Ambatovy hazo efa niasa havadika ho fanaka
Nanao pao-droa Ambatovy tamin’ny nanomezany maimaimpoana ireo hazo efa niasa (toy ny vata efa niasa, palettes…) avy ao amin’ny Toeram-pitrandrahany ao Moramanga ho an’ny fivondronan’ny fikambanana
Fitaovana nomen’ny FAO Lasibatra ny trafika
Manodidina ny 195.510.000 ariary fitaovan’ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny fambolena sy ny sakafo na FAO saika hanomezana rano ny any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy no tratra nisy nanao trafika.